MX TakaTak Short Video App | Made in India for You အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - APKTom
ဒေါင်းလုပ် APK（56.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် MX TakaTak Short Video App | Made in India for You
မူရင်းအိန္ဒိယအတိုဗီဒီယိုအက်ပလီကေးရှင်း Music တေးဂီတဗီဒီယိုများဖန်တီးခြင်း☆လူရွှင်တော်ဆွေးနွေးပွဲအကြားတွင် Videos ဗွီဒီယိုအစစ်များတင်☆ Lip-Sync ဗီဒီယိုများ
| MX TakaTak သည်ဒေသအလိုက်အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ MX Media & Entertainment မှဖန်တီးထားသောဗီဒီယိုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ MX TakaTak တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြွယ်ဝသောဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဖန်တီးရန်အားပေးသည်။
ဖျော်ဖြေရေးအတွက်သင်ဆာငတ်နေပါသလား။ ယခုရယ်စရာကောင်းသည့်ဗီဒီယိုများအတွက် MX Takatak ဗွီဒီယိုများကိုဖတ်ပါ။ Takatak သည်ပျော်စရာကောင်းသည့်အချိန်များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ရေခဲမုန့်များပါသောနောက်ဆုံး app ဖြစ်သည်။
MX TakaTak - Rapper-Songwriter Badshah ၏ရွေးချယ်မှု
အတွက်သာမက 15Mn သြဇာသက်ရောက်သူများအတွက်ပါ။
တိုတိုဗီဒီယိုများ၊ နှုတ်ခမ်းစည်းညှိဗီဒီယိုများ၊ တေးဂီတဗီဒီယိုများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ဗွီဒီယိုများပေါ်တွင်ဝေမျှခြင်းနှင့် WhatsApp (သို့မဟုတ်) အခြားလူမှုမီဒီယာများတွင်မျှဝေပါ။ MX Takatak သည်ဒိုင်ယာလော့လုပ်သည့်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုသာမကသင်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများကိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်းများကို အသုံးချ၍ နောက်စူပါစတားဖြစ်လာနိုင်သည့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သူလည်းဖြစ်သည်။ MX TakaTak App သည်မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့်သင်ကြည့်ရှု။ မျှဝေနိုင်သောသင်နှင့်ပျော်စရာကောင်းသောဗီဒီယိုများကိုပေးသည်။ ရေခဲမုန့်စားနေစဉ်ယောရှဗွီဒီယိုများပေါ်တွင်ရယ်စရာကောင်းသော၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားပါ။ သင်၏အပန်းဖြေချိန်တွင် Takatak အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့် moj ကိုယူပါ။
MX Takatak အက်ပလီကေးရှင်းများ
MX Takatak App သည် သင်၏ကျော်ကြားမှုကိုရရှိရန်အခွင့်အရေးရရှိသည့်အိန္ဒိယအခမဲ့တိုတိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူအက်ပလီကေးရှင်းသည်သင့်အိမ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှအင်တာနက်အာရုံခံစားမှုဖြစ်လာစေရန်နောက်လိုက်မြောက်များစွာရှိသည်။
ယခု Takatak တွင်ပါရမီရှင်အနုပညာရှင်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးသူ ၁၅ သန်းကျော်
- သင်အကြိုက်ဆုံး Takatak ကြယ်များနှင့် Gima Ashi၊ Manjul Khattar, Aashika Bhatia, Khushi, Lucky Dancer, Angel Rai နှင့်အခြားသူများ၏ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ပါ။ ယခုသူတို့ကိုလိုက်နာပါ။
- ဗီဒီယိုများခေတ်စားလာခြင်း - Dialogue Dubbing၊ ဟာသ၊ ဂိမ်းကစားခြင်း၊ DIY၊ အစားအစာ၊ အားကစား၊ အားကစား၊ > Music Video Maker အက်ပလီကေးရှင်း
- အပျော်တမ်းသီချင်းများကိုတိုတိုတုတ်တုတ်ဖန်တီးပါ၊ သင်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၊ ဗွီဒီယိုများကိုကလစ်လုပ်ပါ။ ဗွီဒီယိုတစ်ခုရိုက်ကူးစဉ်အတွင်းအလှအပဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ * ချိန်ညှိချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျစစ်ထုတ်နိုင်သောအရာများစွာရှိသည်။ * အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများအရေအတွက် * စတစ်ကာများနှင့်ချစ်စရာကောင်းသောရုပ်ပြောင်များကိုပေါင်းထည့်ခြင်း - နောက်ဆုံးရုပ်သံများပို့ချခြင်း - MX Takatak ပေါ်ရှိသတင်းများကိုလေ့လာခြင်း။ အပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဗွီဒီယိုများကိုအလွယ်တကူရှာဖွေပါ။ - နောက်လာမည့်လူကြိုက်များသောဖန်တီးသူဖြစ်လာပါ။ သင်၏ပရိုဖိုင်ကိုဖန်တီးပါ၊ ဗွီဒီယိုများကို ရိုက်ကူး၍ တင်ပါ။ - ကြွယ်ဝသောတေးဂီတစာကြည့်တိုက်။ သင်၏ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ကိုနောက်တစ်ဆင့်သို့တက်။ အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကမ္ဘာကြီးကိုသော့ဖွင့်ပါ။ - Trending videos: ပွတ်ဆွဲရုံဖြင့်ပူပြင်း။ ပျော်စရာကောင်းသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုပါ။ ချက်ချင်းအဆင်ပြေချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်၊ ချက်ချင်းမဖွင့်ပါ။ - အခြေအနေကိုသိမ်းပြီးမျှဝေပါ။
ရွေးချယ်ရန်အတွက်ဗီဒီယို ၁၀,၀၀၀ အထိရှိသည်။
MX Takatak App ကိုဘာသာစကား ၁၀ မျိုးဖြင့်ရနိုင်သည်။ မာလာဂျီ၊ ဘူဂေးရီးယား၊ ဂူဂျာရီးယား၊ မာရသီ၊ ပန်ချာပီ၊ အင်္ဂလိပ်နှင့်အခြားဗီဒီယိုများတွင်ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ပါ။ ဗွီဒီယိုများရိုက်ကူးရန်၊ ဗွီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်၊ ခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်နှုတ်ခမ်းကိုက်ညှိခြင်းဗီဒီယိုများနှင့်မျှဝေပါ!
M MX TakaTak တွင်လေ့ကျင့်ခြင်း: 🔥
ဆက်သွယ်ရန်: [email protected]
ဤ app ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ကြယ် ၅ ပွင့်ကိုပေးပါ။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်!
အရမ်းေကာင်သွားတယ်